Sex Drive နှင့် Hypersexuality သည်လိင်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင် Pedophilic စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ (၂၀၁၅) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
comments: လေ့လာမှု porn အမျိုးအစားများမှတဆင့်ယေဘုယျတင်းမာမှုကလေးသည်ညစ်ညမ်း (သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဆယ်ကျော်သက် porn အဖြစ်ကိုအနည်းဆုံးအသက်မပြည့်သေး porn) ကို အသုံးပြု. ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုမှ:
ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးခုစလုံးအတွက်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာသီးခြားလွတ်လပ်သောဆက်သွယ်မှုရှိပုံရသည်။ စာပေတွင်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်များစွာကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးခြင်း၌ပါ ၀ င်ရန်နောက်ကွယ်လှုံ့ဆော်မှုရှုထောင့်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်ကလေးသူငယ်များနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာရှာဖွေသည့်အပြုအမူများ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပုံရသည်။27, 28] ။ ညစ်ညမ်းမှီခို [hypersexual ယောက်ျားတစ်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံဖြစ်ပါသည်1, 2]. ထို့ကြောင့်, လိင် drive ကိုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် (က) ပုံမှန်ညစ်ညမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကျယ်ပြန့်-ပြန့်ပွားရေးစိတျဝငျစားတိုးမြှင့်လိင် drive ကို၏လက္ခဏာများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ ထို့ကြောင့်အထီး Juvenile တစ်နမူနာအတွက် Svedin et al  မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ H ကိုence ကြောင့်မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကလေးညစ်ညမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရရှိတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါပုံရတယ်  ။ အလားတူပင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုအတွက် variable ကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်သောစိတ် [ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်း28] ။ လိင်မှုကိစ္စသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသို့ ဦး တည်ခြင်းရှိမရှိမသေခြာသေးပါ။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရရှိခြင်းသည် hypersexual အပြုအမူအတွက်အားကောင်းသောအားဖြည့်ပေးသောလည်ပတ်နေသောအားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် hypersexual အပြုအမူ / လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော (ဆိုလိုသည်မှာရှည်လျားသော - လောင်ဂျီတွဒ်) စစ်ဆေးမှုကိုအနာဂတ်သုတေသနတွင်ရည်ရွယ်သင့်သည်။ ”
Published: ဇူလိုင်လ 6, 2015
Verena Klein အလက်ဇန္ဒားအက်ဖ် Schmidt က, ဒံယေလ Turner, ရွယ်တူချင်း Briken
28 စက်တင်ဘာ 2015: အဆိုပါ PLOS ONE န်ထမ်းများ (2015) ပြင်ဆင်ချက်: တစ်အမျိုးသားအဝန်းနမူနာအတွက် Pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူလိင် Drive ကိုနှင့် Hypersexuality Associated ရှိပါသလား PLoS ONE 10 (9): e0139533 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0139533 ကြည့်ရန်ဆုံးမခြင်း
အများကြီးလက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြား (အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပုံစံ) hypersexuality အကြောင်းကိုလူသိများသော်လည်းအရာ hypersexual အပြုအမူ paraphilic နှင့်အထူးသဖြင့် Non-မှုခင်းလူဦးရေအတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုရန်ဒီဂရီထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အကြားအသင်းအဖွဲ့များ (TSO) နှင့်အခြားလိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများ, antisocial အပြုအမူ, pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၏ကြီးမားသောလူဦးရေ-based အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူ elucidate ဖို့ဖြစ်တယ်။ နမူနာအနေနဲ့အွန်လိုင်းလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ 8,718 ဂျာမန်အမျိုးသားများပါဝင်သည်။ Hypersexual အပြုအမူ Self-အစီရင်ခံ TSO ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Self-အစီရင်ခံလိင် drive ကို, ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းတွင်နှင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ထား hierarchical Logistic ဆုတ်ယုတ်ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားတို့တဘက်၌ Self-အစီရင်ခံအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူကလေးများနှင့် antisociality အကြောင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျချိတ်ဆက်ခဲ့သည်လေ့လာဆန်းစစ်။ အဘယ်သူမျှမစုစည်းလိင် drive ကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့်, multivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားအပြုအမူရှိခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင် drive ကိုကလေးများပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့် antisociality နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေလက်တွေ့လက်တွေ့တွင် antisocial သို့မဟုတ် pedophilic ယောက်ျားအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်း၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် hypersexual တစ်ဦးချင်းစီအတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွားများနှင့်အပြန်အလှန် hypersexuality အထူးသဖြင့် antisociality နှင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် prepubescent အမျိုးသားတို့တဘက်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏အရေးကြီးသောခန့်မှန်းကြသည်။
ကိုးကား: Klein V ကို, Schmidt က AF, Turner: D, Briken P ကို ​​(2015) တစ်အမျိုးသားအဝန်းနမူနာများတွင်လိင် Drive ကိုနှင့် Pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးနှင့်အတူ Hypersexuality Associated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုရှိပါသလား PLoS ONE 10 (7): e0129730 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0129730
အယ်ဒီတာ: Ulrich အက်စ် Tran, ဗီယင်နာတက္ကသိုလ်စိတ်ပညာ၏ကျောင်း, သြစတြီးယား
Received: ဇန်နဝါရီလ 9, 2015; လက်ခံခဲ့သည်: မေလ 12, 2015; Published: ဇူလိုင်လ 6, 2015
မူပိုင်: © 2015 Klein et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့အသိအမှတ်ပြုကြသည်
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဒါဟာသုတေသနဂျာမန်မိသားစုရေးရာဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများ, အမျိုးသမီး, နှင့်လူငယ်များအနေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် [hypersexuality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် paraphilic အကျိုးစီးပွားအကြား link တစ်ခုအဘို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားပေးစာပေအနေနဲ့တိုးမြှင့်ငွေပမာဏရှိခဲ့1, 2] ။ Hypersexuality သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံကိုဖော်ပြရန်တစ်ထီးအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ Kinsey et al ။  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ဝေါဟာရကို "စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင် / သီတင်းပတ်" (TSO) ခဲ့ကြသည်။ TSO ( "ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီစေ့စပ်ခဲ့သောအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများမှဆင်းသက်လာ orgasm များ၏ပေါင်းလဒ်" အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်  စစ။ 510-511) ထိုသို့သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်တစ်ပါတ်ကာလအတွင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်, TSO တစ်ဦးကျန်ရစ် skewed ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် 15 နှင့် 25 နှစ်ပေါင်းအကြားအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွက်အထွတ်အထိပ်ကိုပြသနေသည်။ ထို့အပွငျ TSO [တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဆကျဆံရေးအဆငျ့အတနျးထဲကနေမှီခိုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လွတ်လပ်သော testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ဟန်4] ။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်၌, Kafka  hypersexual အပြုအမူများအတွက်စံအဖြစ်ခြောက်လတစ်ကာလအတွင်းတစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ခု orgasm အဆိုပြုခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်များ၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအား 1-2 နာရီဖြုန်းခဲ့သည်။
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းယောက်ျား၏ Non-လက်တွေ့အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် hypersexual အပြုအမူများအတွက်အမူအကျင့်ညွှန်ပြချက်အတိုင်း TSO / ရက်သတ္တပတ်≥7cut-off ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kinsey et al ၌တည်၏။  7.6 ယောက်ျားထဲကလေ့လာမှု 5,300% သည်လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကျော်နေတဲ့ TSO / ရက်သတ္တပတ်≥7သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှိဆုံးမကြာခဏနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည်။ Atwood နှင့် Gagnon  (အထီးက high-ကျောင်းမှကျောင်းသား 5% နှင့်အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများ 3% တခါတစ်ရက် masturbated တွေ့ရှိခဲ့N = 1,077) ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးကကြီးမားသောစစ်တမ်းယောက်ျားကိုနမူနာ (၏ 3.1% အတွက်နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖော်ထုတ်N = 3,159) ။ ထို့အပြင်လူတို့သညျ၏ 7.6% [လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အနည်းဆုံးလေးကြိမ်တစ်ပါတ်အစီရင်ခံ7] ။ လူဦးရေ-based ဆွီဒင်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာခုနှစ်တွင် (N = 2,450), အထီးသင်တန်းသားများ၏ 12.1% [hypersexual အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ8] ။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားမှုနှုန်းထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လောင်းကစားသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် voyeurism, exhibtionism, sadism နှင့် masochism ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ paraphilic အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူလူဦးရေအတွက် paraphilic အကျိုးစီးပွား Meta-analytics အရေးကြီးဆုံးအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပြီး [9, 10] ။ Hypersexuality (သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်မြင့်မားလိင် drive ကို) ကိုလည်း [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောအရေးအပါဆုံးစွန့်စားမှုအချက်များကြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်11] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက် reoffending များအတွက်တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်  ။ ထို့အပွငျ hypersexual အပြုအမူပုံစံများ [အသိုင်းအဝိုင်းထိန်းချုပ်မှုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ပိုပြီးဖြစ်ဟန်13, 14] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြင့်သောလိင် drive ကို [အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အစီရင်ခံထားသည်15]. ဖြစ်နိုင်သည် hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးအမူအကျင့်ပုံစံအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကလေးတွေဆန့်ကျင် 341 High-အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးနမူနာအတွက် recidivism နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviant အကြောင်းအရာကဒီနမူနာထဲမှာ reoffending များအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်  ။ ဒီလေ့လာမှုတွေအများစုမှတစျခုမှာသိသာန့်အသတ်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသီးသန့်နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လူငယ်တစ်ဦးဆွီဒင်အသိုင်းအဝိုင်း-နမူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်သောစိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်အားလုံးနီးပါးအချိန်) အတွက် [Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်17] ။ အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့် hypersexual အပြုအမူအပေါ်သုတေသနပြုလုံးဝတသမတ်တည်းမဟုတ်ပါ။ Malamuth et al ကလေ့လာမှုမှာ  အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်လိင်ဆက်ဆံမှုရန်လိုအမျိုးသားတွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ဥပမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေ, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လိင်ဆီသို့သဘောထားတွေ) များအတွက်ပိုမိုမြင့်မား preference ကိုအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်တပတ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံနှုန်း orgasm မြင့်မားအကြိမ်ရေညွှန်ပြခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့အမြင့်မားတဲ့လိင် drive ကိုသူတို့ရဲ့နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးစေရန်, Långströmနှင့် Hanson အားဖြင့်လေ့လာမှု  hypersexuality နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် paraphilic အကျိုးစီးပွားအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြတစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကို Non-မှုခင်းလူဦးရေအတွက်, hypersexual အပြုအမူနှင့် paraphilic အကြား link ကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ, အထူးသဖြင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားအကြား hypersexuality အကြောင်းကိုတွေ့ရှိချက်ကိုဆက်သွယ်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကယောက်ျား၏ကြီးမားသောလူဦးရေ-based အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူနှင့် TSO / လိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများအကြားအသင်းအဖွဲ့စူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကြောင့်အသိုင်းအဝုိင်းနမူနာအတွက်သုတေသနတစ်ခုမရှိခြင်း, သာနည်းနည်းယောက်ျားအတွက် hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှ criminological အချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ putative အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်ရွယ်ချက် TSO အခြားလိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများနှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအပါအဝင် antisocial အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့ elucidate ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပွငျအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် TSO အပေါ်အများဆုံးလေ့လာမှုများ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုလျစ်လျူရှုနှင့်တိုကျတှနျးထားပါပြီ1] ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်း TSO နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်။
အဆိုပါအစီရင်ခံဒေတာ [prepubescent ကလေးငယ်များအတွက်ဂျာမန်အမျိုးသားများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့လူဦးရေ-based အွန်လိုင်းလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း19] ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဂျာမန်မိသားစုရေးရာဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများ, အမျိုးသမီး, နှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံးတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့သုတေသနစီမံကိန်းကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဂျာမန်စျေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအွန်လိုင်း panel ကနေတဆင့် data တွေကိုစုဆောင်းဖို့အခွင့်အာဏာခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု၏ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အီးမေးလ်တွင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကခလုတ် "ကိုလက်ခံ" ဟုအဆိုပါအွန်လိုင်းသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်တမ်း၏အစအဦးမှာအွန်လိုင်းသဘောတူညီခကျြပုံစံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မှာ, ရိုးရှင်းစွာ survey's ဝဘ်စာမျက်နှာထွက်ခွာခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချက်မှာလေ့လာမှုကနေဆုတ်ခွာဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခု option ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသို့ထည့်သွင်းခံရခြင်းမှတစ်ဦးချင်းစီဒေတာတားဆီးကြောင်းကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။ အပြီးအစီးအမည်ဝှက်နှင့်လျှို့ဝှက်အလားအလာသင်တန်းသားများကိုစိတ်ချပါခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, တက္ကသိုလ်ဆာဗာစျေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့်ပါဝင်သူလျော်ကြေးငွေသေချာစေရန်အလို့ငှာသီးခြားဆာဗာကို coded ပါဝင်မှုအဆင့်အတန်းသော်လည်းအဆိုပါစုဆောင်းဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပွငျကြောင့်ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၎င်းထိုသို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဝန်ခံသူကိုယောက်ျားတရားစွဲဆိုဖို့ရည်ရွယ်ကိစ္စတွင်ဥပဒေရေးရာအာဏာပိုင်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုသိရှိနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့သညျ။ သူတို့ရိုးရိုးသားသားဖြေဆိုနှင့် 20 €တဲ့ငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိအံ့သောငှါဒါသင်တန်းသားများကိုဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။ ဂျာမန်စိတ်ဓာတ် Society ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကလေ့လာမှု protocol ကိုနှင့်သဘောတူညီခကျြလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
စုစုပေါင်း 17,917 ယောက်ျား (အသက်၏≥ 18 နှစ်) အရွယ်နှင့်ပညာရေးအဆင့်ဆင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂျာမန်အထီးလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်စျေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်မှာ link ကို 10,538 ကြိမ်နှင့်အချက်အလက် 10,045 သင်တန်းသားများအဘို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိရောက်စွာနမူနာ 8,718 သင်တန်းသားများကိုလျှော့ချခဲ့တစ်ဦးချင်းစီစစ်တမ်းများ (; သင်တန်းသားများ၏ 48.7% အမှန်တကယ် link ကိုရယူသုံးသည့်စပိုင်းတွင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းယောက်ျား၏ 82.7%) ဦးပျောက်ဆုံးအချက်အလက်များ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကို '' ယုတ်အသက်အရွယ် (43.5 နှစ်ပေါင်းခဲ့သည်SD = 13.7, အကွာအဝေး 18-89) ။ သူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်အတန်းကိုရည်မှတ်ပါဝင်သူအများစု (71.5% အလုပ်ခန့်ခဲ့ကြ, n = 6,179) သို့မဟုတ်အငြိမ်းစား (13.1%, n = 1,143), 5.6% (n = သင်တန်းသားများ၏ 488) (အလုပ်လက်မဲ့တို့ 9.7%n = 836) ဒေတာစုဆောင်းမှု၏အချိန်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးရှိကြ၏။ သင်တန်းသားများကိုအများစု (56.4%, n = 4,874) ကို 13 ရဲ့အဆုံးမှာခေါ်ဆောင်သွားကျောင်းထွက်ခွာစာမေးပွဲခဲ့th နှစ် 30.3% (n = 2,618) (တစ်က high-ကျောင်းကဒီပလိုမာနှင့်အတူ 12.7% ကျောင်းကကိုလက်စသတ်n တစ်အလယ်တန်းခေတ်သစ်ကျောင်းကိုအရည်အချင်းများနှင့်အတူ = 1,104), 0.3% (n = 24) မျှကျောင်းဆင်းပွဲခဲ့ခြင်းနှင့် 0.3% (n = 28) ကျောင်းနေဆဲဖြစ်ကြသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် 30-49 ၏အသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခု overrepresentation ရှိခဲ့သည်အဖြစ် 65 ကျော်နိမ့်ပညာရေးနှင့်ယောက်ျား underrepresented ခဲ့ကြသည်သော်လည်းသင်တန်းသားများကို [အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးအဆင့်ဆင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂျာမန်အထီးလူဦးရေကနေကွဲပြား19] ။ prepubescent ကလေးငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား Self-အစီရင်ခံပျံ့နှံ့နေတဲ့ကိုရည်မှတ်အသေးစိတ်ရလဒ်များကို for [ရည်ညွှန်း19].
TSO အောက်ပါမေးခွန်းကိုနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့သည်: "ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်၏ထင် ကျေးဇူးပြု.: သငျသညျအီး (နေပါစေဟာအော်ဂဇင်ရရှိခဲ့ပုံကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်ဘယ်နှစ်ယောက် orgasm ခဲ့.g., တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံ, စိုစွတ်သောအိပ်မက်)? "။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင် drive ကို ( "ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်၏ထင် ကျေးဇူးပြု.: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဘို့သင့်အလိုဆန္ဒကိုဘယ်လိုခိုင်ခံ့ခဲ့သလဲ") နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏ, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ("ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ပုံမှန်နေ့ရက်ကိုစဉ်းစားပေးပါ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုခန့်မှန်း ကျေးဇူးပြု., သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ") အဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူ ("ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ပုံမှန်နေ့ကစဉ်းစား ကျေးဇူးပြု. : သင်လိင်နှိုးဆွခြင်းကိုခံရနိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်း (ဥပမာ, အဝတ်အချည်းစည်းလိင်အင်္ဂါ) ကြည့်ရှုဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုခန့်မှန်း ကျေးဇူးပြု. ?") အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင် drive ကိုတစ်ဦး 100-အမှတ် slider ကိုစကေးအပေါ် rated ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုတစ်ခုဖွင့်လှစ်အဖြေပုံစံ (နာရီနှင့်တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ prepubescent ကလေးများမှာညွှန်ကြားထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူ [အတွက်အကဲဆတ်သောလိင်စိတ်ဝင်စားမှုမေးခွန်းလွှာ (ESIQ) ၏တာရှည် 12-item ကိုဗားရှင်းနဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်20] ။ အဆိုပါ ESIQ [အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်အတိုင်းအတာဖြစ်ပြထားပြီး20-22] ။ ယင်းကိုတိုဗားရှင်း၏ပစ္စည်းများကို "(လေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ်မှတ်အမျိုးအစားရည်ညွှန်း (prepubescent ယောက်ျားလေးများသို့မဟုတ်မိန်းကလေးငယ်များ 12 နှစ်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏သို့မဟုတ်ယောက်ျား≤) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖော်ပြတစ်ခုချင်းစီကိုသုံးပစ္စည်းများပါဝင်သည်ငါကခေါ်ဆောင်သွားအဝတ်မှတဆင့်တစ်ဦး ... '' ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရှုရန်ရှာတွေ့","ငါ ... ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်သည်ဟုစိတ်ကူးသောအခါငါစိတ်လှုပ်ရှားရ","ငါကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံစိတ်ကူးမှရှာတွေ့ ... ") နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို ( "ငါလိင်တစ်ဦး caressed ကြပါပြီ ...","ကျွန်မလျှာကိုနမ်းပြီ ...","ကျွန်မတို့ကထိမိသည်ငါ့ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများရတဲ့ခံစားကြပါပြီ ...") ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (> 18 နှစ်) အဖြစ်သက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးခြင်းရှိမရှိ dichotomous စကေး (စစ်မှန်တဲ့ / မှားယွင်းသော) ကိုညွှန်ပြခဲ့ကြရသည်။ မိန်းကလေးများ (α = .81)၊ ယောက်ျားလေးများ (α = .86)၊ အမျိုးသမီးများ (α = .90) နှင့်အမျိုးသားများ (α = .92) နှင့်ပတ်သက်သောလိင်စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်စုစည်းထားသည့် ESIQ subscales များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှု) သည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကိုညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားညွှန်းကိန်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအချက်ဖြင့်အကဲဖြတ်သည် -“ အသက် ၁၈ နှစ်မှာလိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကလေးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ ဥပမာ - အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည့်လိင်အင်္ဂါလိင်အင်္ဂါများကိုသင်ကြည့်ဖူးပါသလား။ ” [စစ်မှန်တဲ့ / မှားယွင်းသော] ။ တနည်းကား, ကလေးများလိင်ရင့်ကျက်၏ prepubescent အဆင့်ဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုရန်ကျောက်ချရပ်နားခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုသမိုင်းကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်၎င်းတို့အားအောက်ပါအတင်းအကြပ်ရွေးချယ်သောမေးခွန်းသုံးခုကိုဖြေဆိုရန်တောင်းခံခဲ့သည် - ၁ ။ သငျသညျအစဉျအမွဲပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်ကာပြစ်မှု (စသည်တို့ကို၏ပြစ်မှုထင်ရှားပြီ. ခိုးယူခြင်း, ဖောက်ထွင်း)?;2။ သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်မှု (စသည်တို့ကို၏ပြစ်မှုထင်ရှားပြီ. ကိုယ်ထင်ရှားဒဏ်ရာ)?;3။ သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှု (စသည်တို့ကို၏ပြစ်မှုထင်ရှားပြီ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, မုဒိမ်းကျင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု)?
စေ့စ့စပ်စပ်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်သည့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် ပျမ်းမျှအကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေ (MAD)  ညစ်ညမ်းကြည့် TSO, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏအဘို့တွက်ချက်တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူအဖြစ်အချိန်ပမာဏခဲ့သည်။ အဆိုပါ MAD ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုများအတွက် TSO ≥ 10 ၏ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အဘို့, နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်≥ 165 မိနစ်တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေအဖြစ်≥ 95 မိနစ်-off ဖြတ်လြှော့။ ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကြွင်းမဲ့အာဏာ TSO (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးရှုထောင်ဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်), ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင် drive ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏအကြားအသင်းအဖွဲ့အတည်ပြုရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်ဆက်စပ်လိင်အပြုအမူ offending, TSO သို့မဟုတ်လိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများနှင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်တွက်ချက်နှင့်ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းတွင်ခဲ့သည်။ hypersexuality များအတွက်အမျိုးအစား cut-off ၏သက်ရောက်မှု elucidate နိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်းသားများကိုအုပ်စုနှစ်စု၌ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်: Kafka အားဖြင့်အဆိုပြုထား cut-off တန်ဖိုးကို TSO ≥7အပေါ်အခြေခံပြီးအဖြစ်အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသော Self-အစီရင်ခံ hypersexuality  ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်လိင် drive ကိုယခုအချိန်အထိအသက်ငယ်တစ်ဦးချင်းစီတစ်ပတ်ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်သတင်းပို့အဖြစ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူပျမ်းမျှအားကျဆင်းမှုအပေါ်သောကြောင့်  ကျွန်တော်အသက်အဘို့အထိန်းချုပ်ထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုအသုံးချဖို့အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ [ထိန်းချုပ်ထား hierarchical binary Logistic ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူ24] အဆက်အသွယ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်လိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများ, antisociality, နှင့်ကလေး-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ဖြစ်နိုင်သောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ဖို့။
ယေဘုယျအားယုတ် TSO / ရက်သတ္တပတ် (3.46 ခဲ့သည်SD = 2.29) ။ ပျှမ်းမျှတွင်ပါဝင်သူများထဲမှ (45.2 မိနစ် / ရက်ကြာအောင်SD လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ရမ္မက်နှင့်အတူ = 38.1) ။ လိင် drive ကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရမှတ် (59.7 ခဲ့သည်SD = 21.4) နှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးများအတွက်အစီရင်ခံနေ့စဉ်ကြာချိန် 13.1 မိနစ် (ခဲ့သည်SD = 19.3) ။ 7,339 အထီး (87.9%) ကိုဂန္ cut-off တန်ဖိုးကို TSO ≥ 1,011 အညီ hypersexual အုပ်စုတစ်စုသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်သော်လည်း non-hypersexual အုပ်စု 12.1 အထီး (7%) ပါဝင်သည်။ လိင် Drive နှင့် TSO အပြုသဘောအချိန်စားသုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ရမ္မက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ထို့အပြင်သိသာထင်ရှားသောအပြုသဘောဆက်စပ်မှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုနှင့်အတူ TSO နှင့်လိင် drive ကိုအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးသက်ရောက်မှုများအတွက်တညျ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှု (တွေ့မြင်ရလဒ်များအလွန်ဆင်တူပုံစံပြသ စားပွဲတင် 1) ။ လိင် drive ကိုညွှန်ပြအားလုံးအစီအမံအပြုသဘော intercorrelated ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုစုပေါင်းလိင် drive ကိုအညွှန်းကိန်းတွက်ချက် zTSO / အပတ်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင် drive ကို ratings -standardized အဖြစ်အချိန်ပမာဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (α = .66) အကြောင်းကိုကူးယဉျနေခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူမှုရေးအညွှန်းကိန်း (အကြမ်းဖက်အိမ်ခြံမြေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) Self-အစီရင်ခံ preconvictions aggregating ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preconvictions သားသမီးများ၏ Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်နှင့်အတူထပ်နိုင်သကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preconvictions ထွက်ထွက်ခွာကာစုပေါင်း antisociality အညွှန်းကိန်းတွက်ချက်။
စားပွဲတင် 1 ။ (ထောင့်ဖြတ်သုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုအထက်, အသက်နှင့်ပညာရေးအဘို့အတညျ့ထောင့်ဖြတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) လိင် drive ကို intercorrelations ၏အကျဉ်းချုပ်။
TSO နှင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားအကြားစပ်လျဉ်းအတည်ပြုရန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်စပ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။ လိင် drive ကို, TSO နှင့် TSO ≥7အပြုသဘောကလေးများနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စုပေါင်းလိင် drive ကိုအပြုသဘောအတိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်သော်လည်း antisocial အပြုအမူကိုရည်မှတ်, TSO နှင့် TSO ≥ 7, အတိတ်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အကြမ်းဖက်ပြစ်မှုများတစ်သမိုင်းမှအပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ စုပေါင်းလိင် drive ကိုအားလုံးဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးအစားနှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (သေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 2).
စားပွဲတင်2။ သုည-အလို့ငှာကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုအန္တရာယ်အချက် intercorrelations ၏အကျဉ်းချုပ်။
hierarchical Logistic ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း prepubescent အမျိုးသားတို့တဘက်၌ Self-အစီရင်ခံအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preconvictions မပါဘဲ) antisociality နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကလေးငယ်များပါဝင်သော antisociality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန် (ကဖြည့်ညှင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအခိုင်အမာပေါ်ထွက်လာသင်္ဘောသဖန်း 1): များအတွက်နမူနာကလေးများအကြောင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျအကြားမျှ link ကိုအဘယ်သူမျှမ preconvictions ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူကိုဆက်သွယ်တဲ့သူယောက်ျားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်သိသိသာသာသားသမီးများ၏အဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား (အကြမ်းဖက်မှု, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု) မှပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများများအတွက်ကြိုတင်ယုံကြည်မှုများအစီရင်ခံခဲ့သောယောက်ျားဘို့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အထူးသ, စုပေါင်းလိင် drive ကိုအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်နှင့်မျှမတို့နောက်ထပ်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု (ပေါ်ထွက်လာစားပွဲတင် 3) ။ စံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preconvictions ဖယ်ထုတ်ပြီးလိင် drive ကိုကလေးများပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့် antisociality မှသုံးလွတ်လပ်သောလင့်များဖော်ထုတ်အဖြစ်အလားတူ Logistic ဆုတ်ယုတ် Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူလေ့လာဆန်းစစ်။ အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ် interaction ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။
သင်္ဘောသဖန်း 1 ။ ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ Self-အစီရင်ခံပမာဏ၏တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်အဆက်အသွယ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နိုင်ခြေ (+ 1 vs SD က။ - ၁ SD) နှင့် antisociality (Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preconvictions စုစည်း;) နမူနာပျမ်းမျှ [အနိမ့်] vs. နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော preconvictions [မြင့်မားသော] ။
စားပွဲတင်3။ hierarchical Logistic ဆုတ်ယုတ်၏အကျဉ်းချုပ်လိင် drive ကို, antisociality နှင့်ကလေးများပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ function ကိုအဖြစ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်။
သော်လည်း, ဖြည့်ညှင်းသူတို့ကရှင်းပြခဲ့သည်ကှဲလှဲအတွက်တစ်ခုသာ 1% တိုးလာဘို့မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကှဲလှဲ၏စာရင်းအင်းသိသိသာသာရှယ်ယာပိုက်ကွန်နှစ်တိုးလက်တွေ့ကျကျဆီလျှော်ခဲ့ကြရှင်းပြသည်။ သို့သော်လွတ်လပ်သော multivariate အဓိကသက်ရောက်မှု (1.1 ထံမှ 2.0 မှလေးသာမှုအချိုးအကြားအရွယ်ရှိစားပွဲတင် 3) antisociality, prepubescent ကလေးများပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များနှင့်လိင် drive ကို (သာ Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အမှု၌အဆုံးစွန်သော) သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကြီးတစ်ခုမဟုတ်သောလက်တွေ့အထီးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် hypersexual အပြုအမူများ၏အမှန်တကယ် paraphilic နှင့် criminological ဆက်စပ်မှုသို့ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ အမျိုးသားတို့တဘက်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအပေါ် Etiological မော်ဒယ်များနှင့်သီအိုရီ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားအပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များပံ့ပိုးသွင်းကုန်အဖြစ် paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် antisociality စဉ်းစားပါ9, 25] ။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုဒီအယူအဆနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ ကလေးများပါဝင်သော antisocial အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်လေ့လာဆန်းစစ် multivariate စာရင်းအင်းများတွင် paraphilic အကျိုးစီးပွားများအတွက်ညွှန်ပြချက်, အဆက်အသွယ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, antisociality and Logistic ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကလေးငယ်များပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နိုင်ခြေသိသိသာသာအတိတ်တွင်ကလေးများနှင့် antisocial အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ Self-အစီရင်ခံပမာဏ၏အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးနှုန်းနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်တိုးပွါးကြောင်း။ ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ ဆနျ့ကငျြ, ထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်သလို pedophilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်၌ရှိသကဲ့သို့မလိင် drive ကိုအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့အသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကွောငျ့, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုကလေးတွေနဲ့အတူ Self-အစီရင်ခံအဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားအပြုအမူအပေါ် TSO ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင် drive ကို၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အထူးသ hypersexual အပြုအမူသုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုများ၏အဆင့်တွင်မဟုတ်ဘဲအသေးစားဖြစ်ကြပြီးလုံးဝတစ်ချိန်ကသို့ ဝင်. ကွယ်ပျောက်ကြောင်းညွှန်ပြ multivariate လေ့လာဆန်းစစ်။
လက်ရှိသုတေသနပြု [ကလေးငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများအတွက်ခန့်မှန်းအဖြစ်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုများအတွက်အထောက်အထားပေးပါသည်26] ။ Ray et al ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနက်  ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းကလေးများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အကျိုးစီးပွားသတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ [ငယ်ရွယ်စကင်ဒီနေးယောက်ျားတစ်နမူနာထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်28] ။ ယခင်ရလာဒ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ပစ္စုပ္ပန်နမူနာကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကလေးများနှင့်ကလေးငယ်များပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့ဆက်သွယ်အပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကလေးငယ်များပါဝင်သောစုပေါင်းလိင် drive ကို, antisocial အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့, သုံးခုစလုံးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှသိသိသာသာလွတ်လပ်သောလင့်များဖြစ်ရှိပုံရသည်။ စာပေမှာတော့ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုများအတွက်အများအပြားရှင်းလင်းချက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ကလေးညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နောက်ခံစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့် [ခေတ်ရေစီးကြောင်းညစ်ညမ်းစေရန်လေ့၏ရလဒ်အဖြစ်ကလေးများနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှား-ရှာအပြုအမူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဟန်27, 28] ။ ညစ်ညမ်းမှီခို [hypersexual ယောက်ျားတစ်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံဖြစ်ပါသည်1, 2] ။ ထို့ကြောင့်, လိင် drive ကိုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် (က) ပုံမှန်ညစ်ညမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကျယ်ပြန့်-ပြန့်ပွားရေးစိတျဝငျစားတိုးမြှင့်လိင် drive ကို၏လက္ခဏာများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ ထို့ကြောင့်အထီး Juvenile တစ်နမူနာအတွက် Svedin et al  မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒါကွောငျ့က [မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကလေးညစ်ညမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရရှိတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါပုံရတယ်30] ။ အလားတူပင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုအတွက် variable ကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်မက်သောစိတ် [ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်း28] ။ သို့တိုင်, ကလိင် drive ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် hypersexual အပြုအမူများအတွက်ခိုင်မာသောစစ်ကူဖြစ်နိုင်သောပုံရသည်အဖြစ်အင်တာနက်အပေါ်ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောတစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားအားဖြည့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။ atypical ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အသုံးပြုမှုကိုအနာဂတ်သုတေသနအတွက်ရည်ရွယ်ရပါမည် hypersexual အပြုအမူ / လိင် drive ကိုသက်ရောက်မှုထားတဲ့ရန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အတိုင်းအတာ သို့ဖြစ်. , non-ဆက်စပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာထွက်ရှိသော longitudinal) စာမေးပွဲ။
antisocial အပြုအမူနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအကြားလူသိများအသင်းအဖွဲ့  လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ antisociality အဘို့အမြင့်မား TSO နှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအရွယ်အစားကန့်သတ်ထားပါသည်။ အနာဂတ်သုတေသနထို့ကြောင့်ပိုပြီးအနီးကပ် testosterone ဟော်မုန်း၏အဆငျ့, TSO နှင့် antisociality အကြားဆက်စပ်မှုတွေဆနျးစစျသငျ့သညျ။
[ရှိပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်သုတေသနတစ်ခုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်နှင့်ရပ်ရွာနမူနာအတွက် TSO နှင့်အတူတိုကျတှနျးထား1] ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ TSO နှင့်လိင် drive ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစားသုံးအချိန်မြင့်မားတဲ့နှုန်းထားနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် [မျှော်မှန်းထားသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကို hypersexual အပြုအမူ၏အဓိပ္ပါယ်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်5] ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ်ဦးလက်တွေ့ရောဂါလက်ခဏာအပြုအမူပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် / သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း Non-ဖှအခြားသူများအားထိခိုက်စေ၏စံနှုန်းမှာစိုးရိမျစရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်သာ၏အဓိပ္ပါယ်သည်။ ယင်းအကျိုးဆက်အတွက်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Non-ဖှအခြားသူများအလားအလာစံနှုန်းဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ရင်တောင် hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလိင် drive ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ hypersexual အပြုအမူအပေါ်နောက်ထပ်သုတေသနလိင်-related ကိစ္စများနှင့်အတူဖြုန်း orgasm နှင့်အချိန်ပမာဏကိုအနားမှာစံနှုန်းအဖြစ်လက်တွေ့ဒုက္ခဆင်းရဲဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာ၏ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရလဒ်များကိုဂျာမန်လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင်အထူးသဖြင့်အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများအတွက်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားအစားသေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်း၎င်း၏ Cross-Section ဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကလက်ရှိလေ့လာမှု hypersexual အပြုအမူနှင့်လိင် drive ကိုအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အမဖြစ်သည့်တည်ငြိမ်-2007 [အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအန္တရာယ်အကဲဖြတ်များတွင်အသုံးပြုထားသည့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူရောထွေးမရသင့်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်32] မဟုတ်သလို hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါရှာဖွေစံနှင့်အတူ  ။ ထို့အပြင်စုစုပေါင်းလိင်ဆိုင်ရာဆိုင်များ၊ လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုများနှင့်လိင်စိတ်ကူးယဉ် / တိုက်တွန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကို“ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပုံမှန်နေ့ရက်” ပုံစံဖြင့်မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဤပုံစံသည်လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်အကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းထက်ဘက်လိုက်မှုများကိုမှတ်မိရန်ပိုမိုအားနည်းနိုင်သည်။ ထိုရက်သတ္တပတ်ကို“ ကျပန်းရွေးချယ်ထားခြင်း” ဖြစ်သဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပိုမိုကိုယ်စားပြုသူဟုယူဆနိုင်သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကြိုတင်ပြprec္ဌာန်းခြင်းများအဖြစ်အသုံးချခြင်းသည်ရှေးရိုးစွဲစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကထိုသူအားခိုးမှု၊ ကျူးလွန်မှုကျူးလွန်မှုသို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးလုပ်ရပ်များအားမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းရမည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်း / လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်ဆံမှုအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ခွဲခြားမှုမရှိခြင်းအကြားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အထူးအရေးကြီးသည်ဟုယူဆနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာပျမ်းမျှအားဖြင့်တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးတွင်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ဓာတ်များနှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။7, 8] ။ hypersexuality နှင့်အတူပတျသကျစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သမျှရငျးနှီးပြဿနာများကိုဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင့်သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အကြားအဆိုပြုထားဂုဏ်ထူးယူထားတဲ့နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ, [ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်2].
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို hypersexual အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက် TSO, လိင် drive ကိုတိုင်းတာအဖြစ်အကြံပြု, ယောက်ျားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားအပြုအမူကိုဆက်သွယ်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်နိမ့်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့လိင် drive ကိုညွှန်ကိန်းများနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဆိုလို hypersexual တစ်ဦးချင်းစီ atypical ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကဲဖြတ်အတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက် (အထူးသဖြင့်မှုခင်းလူဦးရေအတွက်) ပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့် antisocial သို့မဟုတ် pedophilic ယောက်ျားအတွက် hypersexual တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အပြန်အလှန် hypersexuality အတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွားတစ်ခုအကဲဖြတ်နေဆဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: PB AFS VK ၎င်းကို။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: AFS VK ။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့: VK AFS ၎င်းကို PB ။ VK AFS ၎င်းကို PB: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Kafka အမတ် Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ (2010) Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 940-949 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9483-9 ။ pmid: 19308715
2 ။ Kingston DA, Firestone P ကို ​​(2008) ပြဿနာ hypersexuality: စိတ်ကူးနှင့်ရောဂါ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်စွဲ Compul 15: 284-310 ။ Doi: 10.1080 / 10720160802289249
3 ။ လူ့အထီးအတွက် Kinsey AC အ, Pomeroy သည့် WB, မာတင်အီး (1948) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia တွင်: WB Saunders ကုမ္ပဏီ။
4 ။ Kafka အမတ် (2012) Hypersexual Disorder: DSM-5 လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ခေတ်ပြိုင်အငြင်းပွားစရာများ။ အဆိုပါ 12 မှာတင်ဆက်စက္ကူth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူများ၏ကုသမှုများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းမှ။ ဘာလင်: ဂျာမနီ။
5 ။ Kafka အမတ် (1997) အမျိုးသားများအတွက် Hypersexual အလိုဆန္ဒ: တစ်ခုကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့် paraphilias နှင့် paraphilia-related မမှန်နှင့်အတူယောက်ျားများအတွက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 26: 505-526 ။ pmid: 9343636
6 ။ Atwood JD, ကောလိပ်လူငယ် (1987) J ကိုလိင်ပညာရေးမထေရ် 13 အတွက် Gagnon ဂျေ Masturbatory အပြုအမူ: 35-42 ။
7 ။ Laumann EO, Gagnon JH မိုက်ကယ် RT ကိုမိုက်ကယ်က S (1994) လိင်၏လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်။ ချီကာဂို: ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။
8 ။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏Långström N ကို, Hanson RK (2006) မြင့်မားသောနှုန်း: ဆက်စပ်မှုနှင့်ခန့်မှန်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ 35: 37-52 ။ pmid: 16502152 Doi: 10.1007 / s10508-006-8993-y က
9 ။ Hanson RK, Morton-Bourgon Ke (2005) persistent လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: recidivism လေ့လာမှု Meta-analysis သည်။ 73-1154: J ကို Clin Psychol 1163 နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ pmid: 16392988 Doi: 10.1037 / 0022-006x.73.6.1154
10 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအန္တရာယ်အချက်များ၏သဘောသဘာဝအပေါ်တချို့ကအဆိုပြုချက်: မန်း RE, Hanson KR, Thornton: D (2010) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism များအတွက်အန္တရာယ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း။ လိင်အလွဲသုံးမှု 22: 191-217 ။ Doi: 10.1177 / 1079063210366039 ။ pmid: 20363981
11 ။ Hanson RK, Harris က AJR (2000) အဘယ်မှာကျနော်တို့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သင့်သလဲ လိင်ပြစ်မှု recidivism ၏ dynamic ခန့်မှန်း။ Crim ရုံပြုမူနေ 27: 6-35 ။ Doi: 10.1177 / 0093854800027001002
12 ။ Kingston DA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့တွင်အဘရက်ဖို့ဒ JM (2013) Hypersexuality နှင့် recidivism ။ လိင်စွဲ Compul 20: 91-105 ။
13 ။ ထောင်ချခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်မာရှယ် LE, မာရှယ် WL (2008) လိင်စွဲလမ်း။ လိင်စွဲ Compul 13: 377-390 ။ Doi: 10.1080 / 10720160601011281
14 ။ မာရှယ် LE, မာရှယ် WL, Moulden HM, Serran GA ထောင်ချခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ကိုက်ညီအသိုင်းအဝိုင်းမဟုတ်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ (2008) ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ လိင်စွဲ Compul 15: 271-283 ။ Doi: 10.1080 / 10720160802516328
15 ။ Knight ဟာ RA, Sims Knight ဟာ je (2003) အမြိုးသမီးမြားဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူစမ်းသပ်စဉ်ကအခြားရွေးချယ်စရာယူဆချက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 989: 72-85 ။ pmid: 12839887 Doi: 10.1111 / j.1749-6632.2003.tb07294.x
16 ။ Kingston DA, Fedoroff P ကို, Firestone P ကို, ဟင်းက S, ဘရက်ဖို့ဒ JM (2008) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြား recidivism အပေါ်အကြိမ်ရေများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများ၏သက်ရောက်မှု။ ကျူးကျော်ပြုမူနေ 34: 341-351 ။ Doi: 10.1002 / ab.20250 ။ pmid: 18307171
17 ။ Kjellgren ကို C, Priebe, G, အထီးလူငယ်အတွက် Svedin CG, Långström N ကို (2010) လိင် coercive အပြုအမူ: ယေဘုယျနှင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ၏လူဦးရေစစ်တမ်းကို။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 1161-1169 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9572-9 ။ pmid: 19888644
၁၈။ Malamuth NM, Linz D, Heavey CL, Barnes G, Acker M (18) အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားတို့၏ပconflictိပက္ခကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်လိင်မှုကျူးကျော်မှုပုံစံကိုအသုံးပြုပြီး ၁၀ နှစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ J ကို Pers Soc Psychol 1995: 10-69 ။ pmid: 353 Doi: 369 / 7643309-10.1037
19 ။ Dombert B, Schmidt က AF, ပိတ်ပင် R ကို, Briken P ကို, Hoyer J ကို, Neutze J ကို, et al ။ (2015) prepubescent ကလေးငယ်များအတွက်ယောက်ျား '' Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဘယ်လိုဘုံပါသလဲ စာနယ်ဇင်းအတွက် J ကိုလိင် Res ။
20 ။ ပိတ်ပင် R ကို, Schmidt က AF, ကလေးလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား Clabour J ကို (2010) သွယ်ဝိုက်အစီအမံမြား: A multimethod ချဉ်းကပ်နည်း။ Crim ရုံပြုမူနေ 37: 319-335 ။ Doi: 10.1177 / 0093854809357598
21 ။ Schmidt က AF, Gykiere K ကို Vanhoeck K ကိုမန်း RE, ပိတ်ပင် R ကို (2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာင့်ကျက်မှုဦးစားပေး၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အစီအမံ child sexual abuse ၏ Subtype ခွဲခြား။ လိင်အလွဲသုံးမှု 26: 107-128 Doi: 10.1177 / 1079063213480817 ။ pmid: 23524323
22 ။ Schmidt က AF, Mokros တစ်ဦးက, ပိတ်ပင် R ကို (2013) စဉ်ဆက်မပြတ် pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုလား? တိုက်ရိုက်နဲ့သွယ်ဝိုက်အစီအမံအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးက taxometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ 25-1146: Psychol 1153 အကဲဖြတ်။ Doi: 10.1037 / a0033326 ။ pmid: 23815115
23 ။ Leys ကို C, Ley ကို C, Klein, အိုဘား P ကို, Licata L ကို (2013) ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ကိုထောကျလှမျး: အပျမ်းမျှတစ်ဝှမ်းအကြွင်းမဲ့အာဏာသှဖေကိုသုံးယုတ်ပတ်ပတ်လည်စံသွေဖည်မသုံးပါနဲ့။ J ကို Exp Soc Psychol 49: 764-766 ။ Doi: 10.1016 / j.jesp.2013.03.013
24 ။ Cohen ကိုဂျေ, Cohen ကို P ကိုအနောက်စင်ကာပူဒေါ်လာ, Aiken LS (2003) ကအမူအကျင့်သိပ္ပံအဘို့အမျိုးစုံဆုတ်ယုတ် / ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ Mahwah: Lawrence Erlbaum ။
25 ။ Seto MC အမျိုးသားတို့တဘက်၌ (2008) Pedophilia နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့: သီအိုရီ, အကဲဖြတ်များနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။
26 ။ Seto MC, Cantor JM, Blanchard ဖြစ်ပြီး R ကို (2006) ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပြစ်မှုများ pedophilia ၏ခိုင်လုံသောအဖြေရှာတဲ့ညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol 115: 610 ။ pmid: 16866601 Doi: 10.1037 / 0021-843x.115.3.610
27 ။ ray ဖက်စပ်, Kimonis ER, Seto MC (2014) ဆက်စပ်မှုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမော်ဒ။ လိင်အလွဲသုံးမှု 26: 523-45 ။ Doi: 10.1177 / 1079063213502678 ။ pmid: 24088812
28 ။ Seto MC, Hermann, CA, Kjellgren ကို C, Priebe, G, Svedin CG, Långström N ကို (2014) ကလေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်လူငယ်ဆွီဒင်ယောက်ျား၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ Doi: 10.1007 / s10508-013-0244-4
29 ။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ epidemiological လေ့လာမှုကိုအခြေခံသောညစ်ညမ်းတစ်ဦးကလူဦးရေရဲ့ Svedin CG, Åkermanငါ Priebe, G (2011) မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဂျာနယ်မြီးကောင်ပေါက် 34: 779-788 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010
30 ။ Seigfried-Spellar KC, ရော်ဂျာ MK (2013) deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား ကွန်ပျူတာက Hum ပြုမူနေ 29: 1997-2003 ။ Doi: 10.1016 / j.chb.2013.04.018
31 ။ Yildirim bo, Derksen JJ (2012) Testosterone နဲ့ဘဝကို-သင်တန်းမြဲ antisocial အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 200: 984-1010 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2012.07.044 ။ pmid: 22925371
32 ။ Hanson RK, Harris က AJR, Scott TL, Helmus L ကို (2007) အသိုင်းအဝိုင်းကြီးကြပ်မှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအန္တရာယ်အကဲဖြတ်: အဆိုပါ Dynamic ကြီးကြပ်စီမံကိန်း (အစီရင်ခံစာအမှတ် 2007-05) ။ Ottawa: ON: ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကနေဒါ။